Tag: chipenyu gif Martech Zone
Tag: chipenyu gif
Maitiro Ekugadzira Iyo Animated GIF YeYako Inotevera Imeyili Yekushambadzira Campaign Uchishandisa Photoshop
Chishanu, January 28, 2022 Chishanu, January 28, 2022 Douglas Karr
Tine nguva inoshamisa yekushanda nemutengi akakosha Closet52, chitoro chemadhirezi chepamhepo chatakamaka uye kuvaka kubva pasi kune kambani yakavambwa uye inozivikanwa yemafashoni muNew York. Hutungamiri hwavo hunogara huchishanda nesu pamazano ekubatana kwemushandirapamwe unotevera kana zano ratiri kuita. Sechikamu chekuita kwavo, takaendesa Klaviyo yeShopify Plus. Klaviyo inzvimbo inozivikanwa yekushambadzira otomatiki chikuva ine yakasimba kwazvo yekubatanidza kune
Anogadzira mifananidzo: Ita-I-Iwe Pamoyo Studio, Yekushambadzira Vhidhiyo Edhiyo, uye Vhidhiyo Ad Anovaka
Mugovera, January 23, 2021 Mugovera, January 23, 2021 Douglas Karr
Mifananidzo yehupenyu uye inorarama inofanirwa kune ese masangano. Mavhidhiyo ari kuita zvakanyanya, anokwanisa kutsanangura akaoma pfungwa muchidimbu uye nekupa chiitiko chinoonekwa uye chinonzwika. Ipo vhidhiyo iri yepakati isinganetsi, inowanzo kusakundikana kumabhizimusi madiki kana vashambadziri nekuda kwezviwanikwa zvinodiwa: Professional vhidhiyo uye odhiyo michina yekurekodha. Nyanzvi yezwi pamusoro pezvinyorwa zvako. Unyanzvi hwemifananidzo uye mifananidzo yekuisa. Uye, pamwe, yakanyanya kudhura uye
Tarisa uone Iyi Inogwara yeMhuka GIF Email kubva kuNetflix
Chishanu, Mbudzi 17, 2017 Douglas Karr
Mune mazhinji emaemail akanakisa maitiro ekuti ndiverenge, nyanzvi dzinowanzoodza moyo vatengesi veemail kubva mukugadzira maemail ane chifananidzo chimwe. Ini handisati ndambove fan yemitemo yakadai, ini ndinogara ndichifunga kuyedza yakasarudzika nzira dzakakodzera bvunzo. Nhasi chaiye, ndakagamuchira ino yakanaka email kubva kuNetflix. Yaive nemusoro wenyaya: Chiito chekufungidzira